Faa’iidooyinka Caafimaad ee uu Leeyahay Qaraha/Xabxabka | WARARKA PUNTLAND
Home Caafimaadka Faa’iidooyinka Caafimaad ee uu Leeyahay Qaraha/Xabxabka
Faa’iidooyinka Caafimaad ee uu Leeyahay Qaraha/Xabxabka
Qaraha waa midho Furuut ah oo aad faa’iido u leh jidhka aadamaha, waa midhaha ugu biyaha badan inta la ogyahay khudaarta dabiiciga ah, waxaana lagu qiyaasaa boqolkiiba 92% inuu biyo yahay, sidaas oo ay tahayna waxaa haddana ku jira nafaqo kala duwan oo jidhku aanu ka maarmin kuwaas oo kala ah Vitamin A, B6, C, E iyo borotiinno kala duwan. Waxaa kaloo Qaraha ku jira macdanta Bootaasiyamta oo unug walba oo jidhka ka mid ah uu u baahan yahay. Qaraha kuma jiraan wax dufan ahi, wayna ku yartahay maadada karboohaydrayt-ka, sidaa awgeed laguma tiriyo midhaha lagu Naaxo ama cayilo.
-Qaraha waxaa ku badan maaddada loo yaqaanno “Lycopene” waa maddoo ku yar midhaha kale, waxayna cilmibaadhayaasha Caafimaadku sheegaan in maadadaas inkastoo ay ku yartahay laga helo midhaha Tamaandhada, Saytuunka Cas iyo cinabka Casaanka ah isna.
-Markasta oo Qaraha aad u bislaado oo aad u sii Casaado, maadada “Lycopene” way ku sii badan tahay.
-Borotiinka Qaraha laga helo waxaa u badan nooca loo yaqaanno “citrulline” waxayna muhiim u tahay xididada dhiigga, waxayna kordhisaa qulqulka dhiigga.
-Waxaa kaloo Qaraha ku jira maadada kaalsiyamta iyo birta inkastoo ay ku yaryiihiin.
Caafimaadka Iyo Qaraha:
A- Caafimaadka Wadnaha: Qaraha waxa uu yareeyaa halista Wadna Qabadka iyo unugyada murqaha wadnaha in ay duqoobaan, wuxuu kaloo ka hortagaa in xididada wadnaha ay subag ama dufan ay ku samaysmaan, qoraal lagu daabacay joornaalka dhiig-karka ee ka soo baxa waddanka maraykanka waxay cilmibaadhayaal ku soo bandhigeen in qaraha uu yareeyo cadaadiska dhiigga ku dhaca dadka buurbuuran.
B- Ka Hortagga Caabuqa Iyo Qaraha: Sidaan hore u soo xusayba, maadada “Lycopene” waxay yaraysaa halista caabuqa iyadoo hoos u dhigta waxyaabaha ka qeyb qaata caabuqa iyo inay yarayso sunta jidhka, sidaa awgeed dhakhtaatiir ayaa kula talisa dadka qaba xanuunnada riixa, roomaatiisamka iyo murqa xanuunka in ay badsadaan cunista iyo cabista Qaraha.
C- Fuuq-celinta iyo Qaraha: Qaraha wuxuu ugu horreeyaa cunnada jidhka fuuqeeda soo celisa maadaama ay ku jiraan biyo aad u badan, taasoo macnaheedu yahay in kelyaha iyo qashinsaarkaba aad ugu roon yahay, waxaana loo adeegsadaa in quruuruxa yaryar ee kilyaha ama kaadi mareenka ku jira in uu soo saaro, wuxuuna ka hortagaa suuxdinta kulaylka.
D- Dheefshiidka iyo Qaraha: qaraha waxaa ku jiro maadada fiber-ka ama buunshaha loo yaqaano taasoo dheefshiidka iyo mindhicirrada caloosha u roon.
F: Kansarka borostaytka iyo Qaraha: cilmibaadhayaal dhowr ah ayaa ogaaday in qaraha uu yareeyo tarmidda unugyada qanjidhka borostaytka sidaasna uu ku yarayn karo halista cudurkan, waxaan warbixintaan lagu soo bandhigay machadka ka hortagga kansarka.
Faa’idooyinkaa kor ku xusan awgood, qaraha ama qaraha waxaa lagu xisaabiyaa midhaha ugu horreeya oo haddii la heli karo in lagu afuro ay fiican tahay, sababtuna waa sidatan:
1- Qaraha oo oonka u roon iyo fuuqcelinta jidhka
2- Qaraha oo dheefshiidka u roon oo caloosha iyo mindhicirrada u diyaariya cuntooyinka aad doonayso in aad ku afurto.
4- Qaraha oo leh faa’idooyin nafaqo jidhka uu u baahan yahay.
This post has already been read 83324
Previous articleXildhibaan Fowsiya Yuusuf “Baarlamanka waa in waqti kordhin loo sameeya si doorasho dalka ay uga dhacdo”
Next articleFaadumo Aadan Waa Qoraa Caan ah oo Qormo Qiimo Badan noo Diyaarisay